ပန်ဒိုရာ: ပထမဆုံးရေးတဲ့ ပထမဆုံးတွေ
မပန်ရဲ့ ပထမဆုံးတွေကို လာဖတ်သွားပါတယ်။
ပန်ပန့် ပထမဆုံးတွေ လာစပ်စုသွားတယ်။
ပထမဆုံး ရင်ခုန်တဲ့သူက ၀တ္ထုထဲက ဇာတ်လိုက်တဲ့။
သူ သိုင်းလောက ကို စောစောစွန့် ခွာသွားတာ နှမျောလိုက်တာ..
ကလောင်စွမ်းရော သိုင်းစွမ်းရောဆို ခုဆို အနက်ရောင်သိုင်းလောကသားတွေကို ကောင်းကောင်း ချေမှုန်းပစ်နိုင်မှာ.. :P
တတန်းလုံးအပြစ်မရှိဘဲ ရိုက်တဲ့ဆရာ ကစိတ်ဝေဒနာ အခံ ရှိနေပုံရတယ်။
ရေးပေးတာ ကျေးဇူး မပန်ရေ့
ကျနော်လည်း မိုးကျော်သူရဲ့ သိုင်းဝတ္ထုတွေ သိပ်ကြိုက်တာ ပထမဆုံးဖတ်ဖူးပြီး အရမ်းကြိုက်သွားတဲ့ သူ့ သိုင်းဝတ္ထုက - စက္ကူဓါးနဲ့ ငါးပန်းချီ -တဲ့။ ပန်းချီကားမှာ ရေးထားတဲ့ ငါးရုပ်တွေက အမှန်တော့ စက္ကူဓါးလက်နက်ပုန်းတွေဆိုပဲ။ အဲစက္ကူဓါးတွေနဲ့ လူကို ပစ်လိုက်ရင် သေသာသွားရော ဒဏ်ရာလည်း ရှာလို့မရဘူးဆိုပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စက္ကူနဲ့ လုပ်ထားလို့ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ပြီးသွားရင် သွေးနဲ့ပျော်ပြီး ပျောက်သွားလို့ ဆိုပဲ။
အဲ ငါးပန်းချီထဲက စက္ကူဓါးတွေနဲ့ အဘတို့ကို ပစ်ချင်စမ်းပါဘိတော့ဗျား)း)
ရေးတက်တဲ့ဝါရင့်ဘလော့ဂါကြီး ပီသပါပေတယ် အပြင်ကမ္ဘာနဲ့အွန်လိုင်းကမ္ဘာ ၂ ခုစလုံးဖတ်လို့ ကောင်းတယ် ။
နောက်တခါ သိုင်းဝထ္ထု စုရေးကြရင် မပန်ကို ထိပ်ဆုံးကထည့်မယ်။ သိုင်းလောကရဲ့ ဥသျောင်ကြီး အဖြစ်
မပန်က သုံးနှစ်သမီးမှာ လောက်လေးခွ ကိုင်ပြီး ဘာလုပ်တာတုန်း။ တော်တော် စိတ်ကြီးတယ် ထင်ရဲ့။ :p
ပန် ပန် ပန် ဒိုးပြား ပန် ပန် ပန် ဒိုးပြား
အသင် ဘလော့ဂါပြောလိုက်တော့မှပဲ အတိတ်ကို ပြန်ပြောင်းကြည့်မိလိုက်သော် ပန်ဒိုးပြားသည်ကား ပွင့်နှင့် မခြား အလွန်လှပေ၏တကား။ ခွိခွိ
ဟာ- လက်ဝဲ သမားပဲ..ဝေးဝေးရှောင်မှ။ ၀ဲတွေ ကူးကုန်အုံးမယ်။
ဒီလိုလေးလဲ ရိုက်ပေးအုန်းမှ။ နို့မို့ ဆောင့်ကြွားကြွားနဲ့ :)
ပန်ဒိုရဲ့ ပထမဆုံးတွေက မိုက်တယ်....
ကိုအောင်သာငယ်နဲ့ ပန်ဒို ပေါင်းပြီး....
သိုင်းလောကကို မွှေ့ ပစ်လိုက်မှာကို...။
သိုင်းဝတ်စုံကတော့ ဟိုဆရာ ပြောပုံအ၇ဆိုရင်..
မပန်က ၂ တန်းကတည်းက သိုင်းဝတ္ထုတွေ ဖတ်နေပြီကိုး.. သိုင်းကျမ်းကျေတာပေါ့ မပန်ရယ်.. အဟီး.. အမလည်း ရည်းစားစာ တစ်စောင်မှ မဖတ်ဖူးပါ။ အဲဒါကြောင့် ထည့်မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ :P မပန်ရေးထားတာက အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းတာပဲ.. :)
ကိုအောင်.. ပထမဆုံး မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူး။
မမိုးချိုသင်း.. ဟုတ်တယ်။ သူ့ကို သနားရာက စတယ်ဆိုပါတော့လေ. (ဟီး)
ကမောင်ရင်... အခုလည်း အတွင်းအားတွေတော့ ကျန်ပါသေးတယ်။
ကိုအောင်သာငယ်.. ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ သိုင်းလောကသား( ဟောင်း)ချင်း ပြန်ဆုံရတာ ပိုဝမ်းသာပါတယ်။
မောင်မျိုး.. ဒီလိုတော့ ပြောပါနဲ့ကွယ်။ နော်..။
လင်း.. နောက်ဆုံးမှာ နိုင်မှ ဖြစ်မှာနော်။
ပုံရိပ်... လေးခွလေးက လက်မ လောက်ကလေး ရှိတာပါကွယ်။ လောက်စာလုံးတော့ ထည့်ပစ်လို့မရ။ သူ့ချည်းကိုင်ပေါက်ချင် ပေါက်မှပဲ။
ဒေါင်း.. တပန်ပန် နဲ့ အမြီးလေး မြှောက်ပြီး ကနေပါလား။
ိကိုဆောင်း..... တကယ်ကို ဘာပြန်ပြောရမှန်း မသိဖြစ်သွားတယ်။ မြင်တဲ့ရှုထောင့်က တယ်စူးရှသကိုး။
မကေ.. ညှင်းရှိတဲ့နေရာကို ၀ဲမပေါက်တော့ပါဘူး။ ကြောက်နဲ့။
ကလူသစ်.... ဘာာာ. ဘာပြောလိုက်တယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကို အားပေးတယ်ပေါ့လေ..။
ကိုဆူးရေ.... ၀တ်စုံကို မျက်စိထဲတောင် မြင်ယောင်သွားတယ်။ ကိုအောင်သာငယ်ကတော့ ဆံရှည်နဲ့ဆိုတော့ ပိုလိုက်မယ်။ ဆံပင်ကို ကြိုးလေးစည်းလိုက်ရုံပဲ။
မနုစံ.. အော်.. ကိုယ့်လိုလူမျိုး ရှိသေးသကိုး။
မ နေခဲ့ဖူးတဲ့ နေရာလေးက စိတ်မှန်းနဲ့တင် အရမ်းကို အေးချမ်းမယ်လို့ ထင်တယ်။ ပထမဆုံး ပင်လယ်ကမ်းခြေကိုသွားတဲ့အချိန်... အဲဒီအပျော်တွေ ကူးစက်သွားတယ်။ ပထမဆုံးတွေကို သိခွင့်ရတဲ့အတွက် tag ပေးတဲ့သူကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟီးဟီး... ဟုတ်သဗျာ... ပထမဆုံး ၀ါဒကတော့ ကျနော်နဲ့ တူတူပဲ။ အဲဒါဟာ သူတို့ စာအုပ်ပေါ်မှာ ရေးထားတာတွေက မှန်လွန်းလို့နဲ့၊ ကိုယ်က မွဲလို့ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ကျနော်ကတော့ နှစ်ခုလုံးပဲ။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ Utopia ဆိုတာကြီးဟာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တာရယ်၊ သူတို့ ၀ါဒက လူ့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံမှာ အရမ်းကို လွှမ်းမိုးလွန်းတာရယ် ကြောင့်... ကျနော် သိပ်သဘောမကျတော့ဘူး။ အနုပညာကိုပါ အစိုးရ ၀ါဒဖြန့်ချည်းပဲ လုပ်ပစ်တာမျိုး ကတော့ ပျင်းစရာကောင်းတယ်။
ပြည့်စုံတဲ့ အခမဲ့ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးရရုံနဲ့ ကျနော့် ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်ခွင့်ကို အဆုံးအရှုံးခံဖို့ဟာ တော်တော်လေး ခက်ခဲပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ နေထိုင် အသုံးအဆောင်တွေကို ထုတ်ပေးနေတဲ့ အလုပ်သမားတွေနဲ့ ကျနော်တို့ စားသုံးဖို့ စိုက်ပျိုး မွေးမြူပေးနေတဲ့ လယ်သမားတွေရဲ့ အရေးပါမှုကို အသိအမှတ် ပြုပြီး သူတို့ကို ကောင်းမွန်တဲ့ လူနေမှုဘ၀မှာ ရှိစေချင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ကတော့ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ :)